အစ်ကိုဖြစ်သူ ဟန်ထူးလွင်ကို ကြောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကြောင့် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ဟန်နေလွင်လွင် - Cele Connections
အစ်ကိုဖြစ်သူ ဟန်ထူးလွင်ကို ကြောင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကြောင့် အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်
အဆိုတော်ကြီး ရင်ဂိုရဲ့ သားနဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်နဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်တို့က ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ခြေရာကိုနင်းပြီး အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်က Big Bag Band နဲ့အတူတူ သီချင်းတွေ သီဆိုနေသလို ဟန်နေလွင်လွင်ကတော့ သူမရဲ့ Hannay and The Zens Band နဲ့အတူတူ သီချင်းတွေ သီဆိုဖန်တီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်နဲ့ ဟန်နေလွင်လွင်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဝါသနာတူကြတာကြောင့် အခြားမောင်နှမတွေထက် ပိုပြီး ရင်းနှီးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်အချိန်ကမှာ ဇနီးနဲ့ကွာရှင်းထားတဲ့ ဟန်ထူးလွင်က အခုဆိုရင် လူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် အမျိုးသမီးတချို့ရဲ့ မျက်စိကျခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဟန်နေလွင်လွင်က အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို “အစ်ကို့ကို ဖွန်ကြောင်တာလည်း ကြောင်ပေါ့နော်.. Delivery တွေကို ခူးခူးကျောင်း အလုပ် Phone Number မပေးပါနဲ့လား အစ်မတို့ရယ်နော်.. မအားလို့ပါ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ထူးလွင်ကတော့ တရားဝင်ကွာရှင်းထားခဲ့တာ လအတော်ကြာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူ အလုပ်တွေအပေါ်မှာသာ အာရုံအပြည့်အဝ စိုက်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဈကိုဖွဈသူ ဟနျထူးလှငျကို ကွောငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှကွေောငျ့ အလုပျပကျြ အကိုငျပကျြဖွဈနပွေီဆိုတဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျ
အဆိုတျောကွီး ရငျဂိုရဲ့ သားနဲ့ သမီးဖွဈတဲ့ ဟနျထူးလှငျနဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျတို့က ဖခငျဖွဈသူရဲ့ ခွရောကိုနငျးပွီး အနုပညာလောကထဲမှာ အောငျမွငျစှာရပျတညျနသေူတှဖွေဈပါတယျ။ ဟနျထူးလှငျက Big Bag Band နဲ့အတူတူ သီခငျြးတှေ သီဆိုနသေလို ဟနျနလှေငျလှငျကတော့ သူမရဲ့ Hannay and The Zens Band နဲ့အတူတူ သီခငျြးတှေ သီဆိုဖနျတီးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟနျထူးလှငျနဲ့ ဟနျနလှေငျလှငျတို့ မောငျနှမနှဈယောကျကတော့ စိတျတူ ကိုယျတူ ဝါသနာတူကွတာကွောငျ့ အခွားမောငျနှမတှထေကျ ပိုပွီး ရငျးနှီးကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျအခြိနျကမှာ ဇနီးနဲ့ကှာရှငျးထားတဲ့ ဟနျထူးလှငျက အခုဆိုရငျ လူလှတျတဈယောကျဖွဈနတောကွောငျ့ အမြိုးသမီးတခြို့ရဲ့ မကျြစိကခြံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုအကွောငျးနဲ့ ပကျသတျပွီး ဟနျနလှေငျလှငျက အလုပျပကျြ အကိုငျပကျြဖွဈနပွေီဆိုတဲ့အကွောငျးကို “အဈကို့ကို ဖှနျကွောငျတာလညျး ကွောငျပေါ့နျော.. Delivery တှကေို ခူးခူးကြောငျး အလုပျ Phone Number မပေးပါနဲ့လား အဈမတို့ရယျနျော.. မအားလို့ပါ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဟနျထူးလှငျကတော့ တရားဝငျကှာရှငျးထားခဲ့တာ လအတျောကွာရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ သမီးနှဈယောကျနဲ့အတူတူ အလုပျတှအေပျေါမှာသာ အာရုံအပွညျ့အဝ စိုကျနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
အိမ်ထဲမှာအနေကြာနေတဲ့ သမီးလေးကို အပြင်လောကကြီးနဲ့ ထိတွေ့ပေးပြီး မိသားစုသုံးယောက်အပန်းဖြေခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးကို ချပြလာတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
ဘွားဘွားကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို ညှိုးငယ်စွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ သူရမောင်ချိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်
မြင်သူတိုင်းက အားကျရလောက်တဲ့အထိ ရွှေရောင်မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်လွန်းနေတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ခင်လွှမ်း